Uxanduva Lwezentlalo | Abaqeqeshi abakhulu
Abaqeqeshi abakhulu > Uxonduva lomsebenzi wasekuhlaleni
Amagqabantshintshi ngokuzibophelela kwethu kunye nomgaqo-nkqubo wethu wokulungisa uxanduva lweshishini kwezoluntu nakumashishini ezothutho labucala.
Njengomnye wabanikezeli abakhokelayo beenkonzo zothutho uxanduva lweshishini lusembindini weshishini lethu.
Siyakholwa ukuba inethiwekhi yethu yokuthutha yabucala kwaye ikhula ngokubalulekayo kubalulekile ekuphuhliseni oluzinzileyo kwicandelo lokuthutha kwiiIltese Maltese. Utyalo-mali kwiinkqubo zothutho lwabucala buqinisa ubutyebi, kudala imisebenzi, kunciphisa ukudibanisa kwezithuthi kunye nokungcola komoya, kwaye kunceda ukujongana nokungabikho kwentlalo.
Siyaqonda ukuba ukuthobela indlela ejongene ngqo negalelo ngqo kwiimpumelelo kweshishini lethu. Ukusebenza kwethu kwimibandela enjengokukhuseleko, ixesha lokunikwa kweenkonzo kunye nokukwazi ukufikelela kufumaneke izinto ezinokusinceda sikhule.
Njengomqhubi wezothutho wabucala, ukusebenza kusukela kwi-1944 kubalulekile ukuba sidlale indima yethu ekujonganeni nokutshintsha kwemozulu kwaye sisebenza nzima ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni yethu. Ukuphucula ukusebenza kwethu kwamandla kungabalulekanga nje kuphela kodwa kunceda sinciphise iindleko zokusebenza.
Ukuzibophezela kwethu kwimigangatho ephezulu yoxanduva lokubambisana nalo luye lwaqatshelwa ngaphandle.
Siyathemba ukuba kule minyaka izayo siza kuba yinkampani yokuqala yezothutho yabucala yaseMalta ukuba iqinisekiswe ngokusemthethweni kwaye yamkelwe njengefemu ethatha inyathelo kutshintsho lwemozulu, njengoko sihlala siphucula ukukhutshwa kwekhabhoni yezithuthi zethu kwaye sityala imali kakhulu kwiinkqubo ezintsha zokunciphisa ikhabhoni. Sisebenza rhoqo kwiindlela ezintsha zokulinganisa, ukulawula nokunciphisa indawo yethu yekhabhoni ngethemba lokunciphisa ngokwenene unyaka nonyaka.
Luxanduva lwethu ukusebenza nabanye ababoneleli kunye namaqela achaphazelekayo afana noogunyaziwe bengingqi ukwenza lula ukuba abakhweli basebenzise izithuthi zabucala. Uthungelwano olusebenzayo, oluhlangeneyo lothutho labucala yeyona nto iphambili kubahambi abashiya iimoto zabo ekhaya. Ngokusebenza ngokusondeleyo nabachaphazelekayo basekhaya siphuhlise iindlela ezintsha zokukhuthaza iipateni zokuhamba ezizinzileyo kungekuphela kwabo benza iiholide kuphela kodwa nabahlali ngokufanayo.
Iinjongo zethu zangoku kunye nekamva:
IGreenest Bus Fleet yaseMalta
Qinisekisa ukuba iPetroli iqhuba kakuhle
Ukuphucula iWindows Energy
Ukunciphisa ukuqeqesha ngaphakathi, ibhasi kunye neemoto kunye nokusetyenziswa kombane kwindawo yethu yokugcina iibhasi
Ukukwazi ukutshala imali kwii-fuel fuels.
Ukuphunyezwa komgaqo-nkqubo wendalo
Ukukhula kwabaPhathi ngeTeknoloji.